यूहन्‍ना3| NNRV Bible | YouVersion
निकोदेमसलाई येशूको शिक्षा
1फरिसीहरूमध्‍ये निकोदेमस नाउँ भएका एक जना मानिस थिए। तिनी यहूदीहरूका महासभाका एक सदस्‍य थिए। 2यिनी राती येशूकहाँ आए, र उहाँलाई भने, “गुरुज्‍यू, हामी जान्‍दछौं तपाईं परमेश्‍वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्‍छ, किनकि परमेश्‍वर साथमा हुनुभएन भने तपाईंले गर्नुभएका यी चिन्‍हहरू कसैले गर्न सक्‍दैन।”
3येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै म तिमीलाई भन्‍दछु, कोही नयाँ गरी जन्‍मेन भने उसले परमेश्‍वरको राज्‍य देख्‍न सक्‍दैन।”
4निकोदेमसले उहाँलाई भने, “मानिस बूढ़ो भएपछि कसरी जन्‍मन सक्‍छ र? के त्‍यो आफ्‍नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्‍मन सक्‍छ?”
5येशूले जवाफ दिनुभयो, “साँच्‍चै म तिमीलाई भन्‍दछु, कोही पानी र आत्‍माद्वारा जन्‍मेन भने परमेश्‍वरको राज्‍यमा पस्‍न सक्‍दैन। 6शरीरबाट जन्‍मेको शरीर हो, र पवित्र आत्‍माबाट जन्‍मेको आत्‍मा हो। 7मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्‍मनुपर्छ भन्‍दा अचम्‍म नमान। 8बतास जता चाहन्‍छ उतै बहन्‍छ। तिमी बतासको आवाज सुन्‍छौ, तर त्‍यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्‍छ, त्‍यो जान्‍दैनौ। आत्‍माबाट जन्‍मेको हरेक व्‍यक्ति त्‍यस्‍तै हुन्‍छ।”
9निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, “यो कसरी हुन सक्‍दछ?”
10येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, “तिमी इस्राएलका गुरु हौ, र पनि यी कुरा बुझ्‍दैनौ? 11साँच्‍चै, म तिमीलाई भन्‍दछु, हामी जे जान्‍दछौं त्‍यो भन्‍दछौं, र हामीले जे देखेका छौं त्‍यसको गवाही दिन्‍छौं, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्‍वीकार गर्दैनौ। 12मैले तिमीहरूलाई पृथ्‍वीका कुरा भनें, र पनि तिमीहरू विश्‍वास गर्दैनौ, त तिमीहरूलाई स्‍वर्गका कुरा बताएँ भने कसरी विश्‍वास गर्न सक्‍छौ? 13स्‍वर्गबाट ओर्लिआउने मानिसको पुत्रबाहेक कोही पनि स्‍वर्गमा उक्‍लेको छैन। 14जसरी मोशाले उजाड-स्‍थानमा सर्पलाई उचाले, त्‍यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ, #गन्ती २१:९ 15र जस-जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ, त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाउँछ।
16 “किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌। 17किनकि परमेश्‍वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस्‌ भनेर पठाउनुभयो। 18जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ, त्‍यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्‍वास नगर्नेचाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्‍वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्‍वास गरेको छैन। 19फैसलाचाहिँ यही हो: ज्‍योति संसारमा आएको छ, र मानिसहरूले ज्‍योतिभन्‍दा बरु अन्‍धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्‍ट थिए। 20किनभने दुष्‍ट काम गर्ने हरेकले ज्‍योतिलाई घृणा गर्छ, र ज्‍योतिमा आउँदैन, नत्रता त्‍यसका काम प्रकट हुनेछन्‌। 21सत्‍यद्वारा जिउने मानिस ज्‍योतिमा आउँछ, र यसरी उसले गरेका कामहरू परमेश्‍वरमा गरिएका हुन्‌ भन्‍ने प्रस्‍टै देखिन्‍छ।”
बप्‍तिस्‍मा-दिने यूहन्‍नाको पछिल्‍लो गवाही
22यसपछि येशू र उहाँका चेलाहरू यहूदिया देशमा जानुभयो, र त्‍यहाँ तिनीहरूसँग केही दिन वास गर्नुभयो, र बप्‍तिस्‍मा दिनुभयो। 23यूहन्‍नाले पनि सालीमको छेउ एनोनमा बप्‍तिस्‍मा दिन्‍थे, किनकि त्‍यहाँ प्रशस्‍त पानी थियो। त्‍यहाँ मानिसहरू आउँथे र बप्‍तिस्‍मा लिन्‍थे। 24त्‍यस बेलासम्‍म यूहन्‍ना झ्‍यालखानमा परेका थिएनन्‌। #मत्ती १४:३; मर्क ६:१७; लूक ३:१९-२०
25त्‍यसै बेला यूहन्‍नाका चेलाहरूको एक जना यहूदीसँग शुद्धीकरणको विषयमा वाद-विवाद भयो। 26यूहन्‍नाकहाँ आएर तिनीहरूले उनलाई भने, “गुरुज्‍यू, यर्दन पारि जो तपाईंसँग हुनुहुन्‍थ्‍यो, जसको बारेमा तपाईंले गवाही दिनुभयो, हेर्नुहोस्, उहाँले बप्‍तिस्‍मा दिइरहनुभएको छ, र सबै उहाँकहाँ जाँदैछन्‌।”
27यूहन्‍नाले जवाफ दिए, “मानिसलाई स्‍वर्गबाट नदिइएसम्‍म त्‍यसले कुनै कुरा पाउन सक्‍दैन। 28‘म ख्रीष्‍ट होइनँ, तर म उहाँभन्‍दा अगाडि पठाइएको हुँ’ भन्‍ने मेरो गवाही तिमीहरू आफै दिन्‍छौ। #यूह १:२० 29जससँग दुलही छ, दुलहा त्‍यही हो। दुलहाको मित्र जो उसको छेउमा खड़ा हुन्‍छ, उसको सोर सुनेर अत्‍यन्‍त आनन्‍दित हुन्‍छ। यसकारण मेरो यो आनन्‍द अब पूर्ण भएको छ। 30उहाँ बढ्‌नु, तर मचाहिँ घट्‌नु आवश्‍यक छ।
31“माथिबाट आउनुहुनेचाहिँ सबैभन्‍दा उच्‍च हुनुहुन्‍छ। पृथ्‍वीबाट हुने पृथ्‍वीकै हो, र पृथ्‍वीकै कुरा बोल्‍छ। स्‍वर्गबाट आउनुहुने सबैभन्‍दा उच्‍च हुनुहुन्‍छ। 32उहाँले जे देख्‍नु र सुन्‍नुभएको छ, त्‍यसको गवाही उहाँ दिनुहुन्‍छ, तर उहाँको गवाही कसैले ग्रहण गर्दैन। 33जसले उहाँको गवाही ग्रहण गरेको छ, त्‍यसले परमेश्‍वर सत्‍य हुनुहुन्‍छ भन्‍ने कुराको प्रमाण दिन्‍छ। 34किनभने जसलाई परमेश्‍वरले पठाउनुभयो, त्‍यसले परमेश्‍वरका वाणी बोल्‍दछ, किनकि परमेश्‍वरले विनानाप पवित्र आत्‍मा दिनुहुन्‍छ। 35पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्‍छ, र सबै थोक उहाँकै हातमा दिनुभएको छ। #मत्ती ११:२७; लूक १०:२२ 36जसले पुत्रमाथि विश्‍वास गर्छ, त्‍यससित अनन्‍त जीवन छ। जसले पुत्रको आज्ञापालन गर्दैन, त्‍यसले जीवन देख्‍नेछैन, तर परमेश्‍वरको क्रोध त्‍यसमाथि रहिरहन्‍छ।”
Explore यूहन्‍ना3by Verse